Sida loo Copy playlist ka iPod in Lugood Library
Jidka A Quick in aad nuqulka playlist ka iPod in Lugood
> Resource > Lugood > Jidka A Quick in aad nuqulka playlist ka iPod in Lugood
"Waxaan iibsaday computer cusub iyo dib Lugood Library. Si kastaba ha ahaatee, waxaan ogaaday heesaha oo dhan waa in Lugood, laakiin playlists tegey. Waxaa jira playlists badan ku xayiran yihiin on my iPod. Waxaan nuqul karaa playlists ka iPod in Lugood? Fadlan caawi "
Ama aad soo iibsatay kombiyuutar cusub ama sababta oo ah shilka PC lama filaan ah, aad kor ku dhamaaday guuldarro wax kasta oo aad Lugood Library. Qaabka ugu dhakhsaha badan dib u dhiska maktabadda Lugood waa ay kaga dayanayaan inay Lugood playlists ka iPod. Si kastaba ha ahaatee, laftiisa Lugood ma kuu ogolaaneyso in aad si toos ah u gudbiyaan playlists ka iPod in Lugood. Si loo sameeyo, waxaad u baahan doontaa iPod ah in suuqa kala iibsiga PC sida TunesGo Wondershare ah. TunesGo waxaa gaar ahaan loogu talagalay in lagu sameeyo wixii Lugood karin - beddelashada music, videos, playlists, sawiro iyo iwm ka iPod in Lugood.
Isku day adigoo isticmaalaya TunesGo Wondershare si ay u dajiyaan playlist ah ka iPod in Lugood!
Fiiro gaar ah: Marka la joogo, kaliya Windows-ku-saleysan isticmaalo awood u yeelan doonaan in ay isticmaalaan Wondershare ka TunesGo (Windows) si playlist ka iPod wareejiyo Lugood. Sida Mac users kuwaas oo u baahan in ay soo dhoofsadaan playlist ka iPod in Lugood Mac, waxaad inaan nasiib sugi version xiga ee Wondershare TunesGo (Mac) . The version Mac ma taageeri iPod playlist hadda wareejinta! Macluumaadka soo socdaa waa ku saabsan sida loo soo dhoofsadaan playlist ka iPod maktabadda Lugood on PC ah Windows-ku-saleysan.
Tallaabada 1. Connect iPod la PC
Download, rakibi, oo ay maamulaan TunesGo Wondershare ah. Connect aad iPod la PC via cable USB ah. Marka aad iPod la ogaado, TunesGo si toos ah muujin doonaa files ama xogta uu furmo suuqa hoose sida sawir hoos ku qoran.
Tallaabada 2. Import playlist ka iPod in Lugood
Laga soo bilaabo uu furmo suuqa hoose, waxaad ka arki kartaa playlist dhanka bidix. Waxaa Click to daaha ka dhan playlists on iPod. Dooro Playlists doonayay oo guji dhoofinta in > dhoofinta in Lugood Library .
Taasi waa. In labaad ah, waxaad ka heli doontaa in aad si guul leh playlists ka iPod soo guuriyeen in Lugood Library. Waa mid aad u fudud, sax? Ka sokow playlist wareejinta ka iPod in Lugood, waxa kale oo aad kartaa dajiyaan playlist ka iPod in computer la Wondershare TunesGo.
Isku day TunesGo Wondershare ah in aad nuqulka aad playlist ka iPod in Lugood hadda!
Waxaa laga yaabaa inaad danaynaysaa in aad ka: